Bit By Bit - အပြေးစမ်းသပ်ချက် - 4.5.3 သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန် Build
သင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်တဲ့ High-အန္တရာယ်, High-ဆုလာဘ်ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလုပ်ဖြစ်တယ်လျှင်မူကား, သင်တို့ကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနဖွတဲ့အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်မှအကျိုးနိုင်ပါတယ်။
တဦးတည်းခြေလှမ်းထပ်မံသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်း၏ချဉ်းကပ်မှုယူခြင်း, အချို့သုတေသီများအမှန်တကယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်စေ။ ထိုထုတ်ကုန်အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ပြီးတော့စမ်းသပ်ချက်နှင့်သုတေသန၏အခြားမျိုးများအတွက်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ ဥပမာအားဖြင့်, မင်နီဆိုတာတက္ကသိုလ်သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အခမဲ့, ရယူထားရတာကိုယ်ပိုင်ရုပ်ရှင်အကြံပြုချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးရာ MovieLens, ဖန်တီးခဲ့သည်။ MovieLens 1997 ကတည်းကစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်ခဲ့ပါသည်, ဤအချိန်ကာလအတွင်း 250,000 မှတ်ပုံတင်ပြီးအသုံးပြုသူများသည်ထက် ပို. 30,000 ရုပ်ရှင်၏ 20 ကျော်သန်း ratings ပေးအပ်ခဲ့ကြ (Harper and Konstan 2015) ။ MovieLens အများပြည်သူကုန်ပစ္စည်းများမှပံ့ပိုးမှုများအကြောင်းကိုလူမှုရေးသိပ္ပံသီအိုရီများစမ်းသပ်ရာမှအထိအံ့သြဖွယ်သုတေသနလုပ်ဆောင်သွားရန်အသုံးပြုသူတက်ကြွစွာအသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုသောဖြစ်ပါတယ် (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) addressing ကိုမှ ထောက်ခံချက်စနစ်များအတွက် algorithmic စိန်ခေါ်မှုများ (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ။ ဤအစမ်းသပ်ချက်ထဲကအတော်များများသုတေသီများအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ထုတ်ကုန်ကျော်ပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုမလိုဘဲဖြစ်နိုင်သောပါပြီမဟုတ်ပေ။
ကံမကောင်းစွာပဲ, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲသည်, သင်တစ်ဦးက start-up, ကုမ္ပဏီကိုနဲ့တူပါကစဉ်းစားသင့်တယ်: High-အန္တရာယ်, High-ဆုလာဘ်။ အောင်မြင်သောလျှင်ဤချဉ်းကပ်မှုရှိပြီးသားစနစ်တွေတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှလာသောသရုပ်မှန်နှင့်သင်တန်းသားများနှင့်အတူသင့်ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်မှုတည်ဆောက်ခြင်းမှလာသောထိန်းချုပ်မှုအများကြီးပေးထားပါတယ်။ ထို့ပြင်ဒီချဉ်းကပ်မှုအလားအလာပိုပြီးသုတေသနကပိုသုတေသီများနှင့်ဒါမှအပေါ် (ပုံ 4.16) မှဦးဆောင်ရသောပိုပြီးအသုံးပြုသူများပို့ဆောင်ပေးသောပိုကောင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ဖန်တီးပေးနိုင်သည်။ တစ်ဦးအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ဝင်သွားပါသည်တစ်ချိန်ကတစ်နည်း, သုတေသနပိုမိုလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူရသင့်ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်နည်းသည်လက်ရှိတွင်အလွန်ခက်ခဲသော်လည်း, ငါ့မျှော်လင့်ချက်ကနည်းပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်အဖြစ်ကပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ တစ်သုတေသီတစ်ဦးကုန်ပစ္စည်းကိုထိန်းချုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ထို့နောက်သည်အထိသို့သော်, ပိုတိုက်ရိုက်မဟာဗျူဟာကုမ္ပဏီ, ငါလာမယ့်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
4,16 ပုံ: သင်အောင်မြင်စွာသင့်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ကိုတည်ဆောက်နိုင်လျှင်, သင်ကအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်မှအကျိုးနိုင်သည်သုတေသန ပို. ပင်သုတေသနမှဦးဆောင်ရသောပိုမိုအသုံးပြုသူများပို့ဆောင်ပေးသောပိုကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်, စေပါတယ်။ အပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဤအမျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်မယုံနိုင်လောက်အောင်ခက်ခဲ, ဒါပေမဲ့သူတို့မဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သုတေသနကို enable နိုင်ပါတယ်။ MovieLens တစ်ဦးအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်ကွင်းဆက်ဖန်တီးခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သောသုတေသနပရောဂျက်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် (Harper and Konstan 2015) ။